सुदूरपश्चिम ११ सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको सेमिफाईनलमा - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! सुदूरपश्चिम ११ सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको सेमिफाईनलमा
सीताराम ओझा, कैलाली, पुस २४ । कैलालीको धनगढीमा जारी प्रथम अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप अन्र्तगत आईतबार भएको खेलमा आयोजक सुदूरपश्चि ११ स्पोर्टस क्लव बिजयी भएको छ । यो जीतसगै सुदूरपश्चि ११ गोल्डकपको सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
धनगढी रंगशालामा भएको खेलमा भारतको पञ्जाव ११ लाई ५–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम ११ सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
उसका लागि मनिराम चौधरीले ह्याट्रिक पुरा गरे भने प्रयण्य अन्जान र सुमीत दुवेले समान एक, एक गोल गरे । पहिलो हाफको १४ औं मिनेटमा गोल गरेका जर्सी नम्वर १७ का मणीरामले पहिलो हाफको ४३ औं मिनेटमा दोस्रो गरे । दोस्रो हाफको ५९ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्दैै उनले ह्याट्रिक पुरा गरे । म्यान अफ द म्याच घाषित मनिराम चौधरीलाई नगद रु ५००० प्रदान गरिएको छ ।
सुदुरपश्चिम ११ का लागि पहिलो हाफको ३८ औं मिनेटमा जर्सी नम्वर १६ का सुमित दुवे र दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयको एक मिनेटमा जर्सी नम्वर ९ का प्रयण्य अन्जानले गोल गरेका हुन् ।
जितपछि प्रतिक्रिया दिदै सुप ११ का कप्तान गजेन्द्र शाहीले सवै खेलाडीहरुको समन्वय र मेहनतले सानदार जित हासिल गर्न सफल भएको वताउनुभयो । पञ्जाव फसटवल क्लवका कप्तान रिमी मेहराले आफुहरुको तालमेल नमिलेका खेल गुमाएको बताउनुभयो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमवार पहिलो खेलमा संकटा क्लव र जगदम्वा लुम्वीनी तथा दोस्रो खेलमा दिल्ली युनाईटेड र सहारा क्लव पोखरा वीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक सुदुरपश्चिम ११ फुटवल क्लवका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिनसभयो ।
पुस २१ गतेदेखि शुरु भएको गोल्डकप आगामी माघ १ गतेसम्म संचालन हुनेछ । गोल्डकप बिजेताले ५ लाख र उपबिजेताले २ लाख ५१ हजार पुरस्कारको ब्यवस्था रहेको छ । गोल्डकपमा भारतका २, भुटान १ र नेपालका ९ गरी १२ टिमको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।